ज्याक मा र दीदीलाई कारबाही गरेर चीनले के सन्देश दिन चाहन्छ ? « Clickmandu
ज्याक मा र दीदीलाई कारबाही गरेर चीनले के सन्देश दिन चाहन्छ ?
यसले ग्रुपो हारमिगाको मूल्य ३४.४ अर्ब डलरको छेउछाउ पुग्ने आँकलन थियो । र, यो अलिबाबाको इतिहासमा कोसेढुङ्गा सावित हुने ठानिएको थियो । तर अन्तिमका समयमा सबैकुरा बदलियो ।
चीनका वित्तीय नियामकले बजारमा प्रतिष्पर्धासँग जोडिएको चिन्तालाई कारक मान्दै सूचिकृत हुने प्रक्रियामा रोक लगाएका थिए । यतिमात्रै होइन, सूचिकृत हुने कार्यक्रममा बिजुलीको आपूर्ति समेत बन्द गरिएको थियो । उनीहरुले कार्यक्रममा बजिरहेको संगीत समेत रोक्दै अतिथिलाई घर फर्किन बाध्य पारिएको थियो ।
अलीबाबा, दीदी र मेइतुआनले छुट्टाछुट्टै बयान जारी गर्दै सरकारको फैसलालाई साथ सहयोग दिने बताएका छन् ।
सरकारले नयाँ प्रतिबन्धको प्रभावमा परेका कम्पनीमा टेसेट(इन्टरनेट कम्पनी), मेइतुआन(फुड डेलिभरी), पिड्युओड्युओ(इकमर्स), दीदी(एप आधारित क्याब सर्भिस), फुल ट्रक एलायन्स, कान्झुम(रिक्रुटमेन्ट), न्यू ओरियन्टल एजुकेशन(अनलाइन एजुकेशन) आदि छन् ।
सरकारले यी कम्पनीलाई सजाय नदिई छाड्न सकिन्न भन्ने दृष्टिकोण स्पष्ट पारेको थियो । यहाँ लगाम कसको हातमा छ ? भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ ।
ग्रुपो हारमिगाको आइपिओमा रोक लगाएपछि सरकारले अन्य टेक्नोलोजी कम्पनीमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ । यी कम्पनीहरु इकमर्श, ट्रान्सपोर्टेसन, फिनटेक, भिडियो गेम्स र अनलाइन एजुकेसन. व्यवसायसँग सम्बन्धित छन् ।
लण्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सका विशेषज्ञ केयु जिनले चीनको उद्देश्य प्राविधिक प्रभुत्व स्थापित गर्नु हो भन्ने तर्क दिन्छन् । यसबाट चीनले प्रमुख क्षेत्रमा ग्लोबल स्ट्याण्डर्ड स्थापित गर्न सक्ने र यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थामा चीनको प्रभाव बढ्ने उनको तर्क छ ।
चीन सरकारको रुचि उपभोक्तालाई सुविधा दिने इकमर्श प्रविधि कम्पनीभन्दा रणनीतिक रुपमा महत्वका मानिने क्वान्टम कम्प्युटर्स, सेमिकन्डक्टर र स्याटेलाइट क्षेत्रको विकासमा धेरै देखिएको छ ।
यसबाहेक सन् २०२५ का लागि चीन सरकारको योजनापनि एउटा मुद्दा हो । चीन सरकारले आफ्नो अर्थव्यवस्थाको ठूलो हिस्सालाई कडाइका साथ कानून लगाउन चाहेको बताइएको छ । –बीबीसी